SIDDEED Ciyaartoy Oo Manchester United Ka Tegi Karaya Inta Ka Horreysa Jimcaha Toddobaadkan - Gool24.Net
SIDDEED Ciyaartoy Oo Manchester United Ka Tegi Karaya Inta Ka Horreysa Jimcaha Toddobaadkan
Suuqa iibka ciyaartoyda ayaa xidhan, laakiin waxa loo ogol yahay inay ciyaartoyda qaarkood bixi karaan illaa inta ka horreysa Jimcaha toddobaadkan.
Manchester United ayaa go’aamo adag u yaallaan maalmaha soo socda, waxaana la sheegayaa inay illaa siddeed ciyaartoy oo kooxdeeda ah tegi doonaan.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo saddex saxeex kusoo guuleystay maalintii ugu dambaysay suuqa iibka ciyaartoyda ee October 5, ayaa waxa uu aaminsan yahay xiddigaha uu hadda haysto, waxaanay taasi meesha ka saaraysaa fursadihii ay heli lahaayeen shan ciyaartoy oo waaweyn iyo saddex yaryar ah oo ay muuqato in aanay xisaabta ugu jirin macallinka reer Norway.
Jimcaha oo uu ku egyahay suuqa gudaha ee England ayaa waxay Manchester United haysataa inay fasixi karto laacibiinteedan oo ku biiri kara naadiyo gudaha ah gaar ahaan heerarka hoose oo sidoo kalena ay kala soo saxeexan karaan, balse laba horyaal ayaa illaa 17ka iyo 25ka uu soo xidhmi doonaa suuqoodu.
Horyaalka waddanka Portugal ayuu suuqiisu furan yahay illaa October 25 halka Ruushka uu illaa October 17 ay kooxihiisu soo iibsan karaan ciyaartooyo cusub.
Wargeyska kasoo baxa magaalada Manchester ee Manchester Evening News ayaa shaaciyey magacyada shan ciyaartoy oo waaweyn oo Manchester United ay diyaar u tahay inay garoonkeeda ka dirto ka hor inta aanay ka xidhmin fursadaha ay iskaga diri karayso, waxaana ugu horreeya goolhayaha reer Argentina ee Sergio Ramero oo booskiisii goolhayaha labaad uu kala baxay Dean Henderson oo kasoo laabtay amaah.
Romero oo ka mid ah saddexda goolhaye ee United ay haysato ayaa laga reebay liiska ciyaartoyda Red Devils ee Champions League xili ciyaareedkan, sidoo kalena waxa muuqata in kulamadii FA Cup iyo League Cup uu yeelanayo Henderson, halka horyaalka Premier League iyo Champions League uu safan doono David de Gea.
Goolhayahan ayaa la sheegayaa inuu tegi karayo horyaalka waddanka Maraykanka ee MLS iyo sidoo kale kooxaha heeerka labaad ee ay u badan tahay inay xili ciyaareedka dambe usoo dallaacaan Premier League.
Phil Jones, Marcos Rojo, Jesse Lingard iyo Brandon Williams ayaa iyaguna ka mid ah xiddigaha Manchester United ka bixi karaya waqtiga kooban ee ay firaaqada u haystaan inay uga tegi karayaan.
Saddex ciyaartoy oo da’yar ah ayaa iyaguna liiska ku jira, waana Ethan Laird, Arnau Puigmal iyo Di’Shon Bernard oo naadiga da’yarta ee United ka tirsan laakiin dalabyo ka helaya kooxo ka dhisan UK.